File များကို attach မရတာ လာကြောင့်လဲГўв‚¬В¦. — MYSTERY ZILLION
342 Mobile Devlopment
101 other mobile
File များကို attach မရတာ လာကြောင့်လဲГўв‚¬В¦.
December 2007 edited January 2008 in Internet & Email
အားလုံးပဲ (Sweet December) သာယာသောဒီဇင်ဘာလ ဖြစ်ပါစေ..
သာယာသောဒီဇင်ဘာလ လို့သာနှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်တယ်..ကျနော်တော့ဒီလ ပထမအပတ်မှာပဲ စိတ်တွေအတော်လေးပိန်သွားရတယ်Гўв‚¬В¦ပထမအကြီးဆုံးပြသနာက..မရှိမဲ့ရှိမဲ့စုထားတဲ့ ပိုက်ပိုက်လေး နဲ့၀ယ်ထားတဲ့ လက်တော့ပ်(Laptop)တစ်လုံးဘိုင့်ဘိုင်ပြ သွားတာ.. ပထမဆုံးနောက်ဆက်တွဲ ကတော့ အရေးတကြီးပို့ဖို့လိုအပ်တဲ့ ဖိုင်ပို့ချင်လို့ နီးရာ Internet CafГѓВ© ဆိုင်ပြေးသွားတော့attach လုပ်ချင်တဲ့ ဖိုင်ကိုဘယ်လိုမှ Attach လုပ်လို့မရတာ.. ကူညီကြပါအုံး..Files တွေကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ attach လုပ်လို့ရအောင်နည်းလမ်းလေးများ..မစကြပါГўв‚¬В¦
sthanm wrote: »
ကျွန်တော်ကတော့ attach တွေကို ဒီလိုပို့တယ်ဗျ...
www.divshare.com မှာ အရင်ဆုံး file ကို upload တင်တယ်..
ဒါမှမဟုတ် www.mediafire.com မှာပေါ့...
ပြီးမှ ရတဲ့ link ကို mail နဲ့ပို့တယ်..
သေလည်း သေချာတယ်လို့ ထင်တာပဲ.. :67:
ဟုတ်ကဲ့...attach လုပ်မယ့်File နည်းသစ်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ. ဒါပေမယ့်..... အဲဒီဆိုင်က ကိုစေတန်ပြောတဲ့နည်း တွေနဲ့ attach လုပ်လို့မရဘူးဗျ..Attach လုပ်လို့မရအောင်ကို တမင် လုပ်ထားတာ..မစပါအုံး...Attach လုပ်လို့မရအောင် လုပ်ထားတာကို ရအောင်လုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေး..
www.divshare.com ကတော့ ရသင့်တယ်..
ကောင်းဗျာ...Laptop လေးကတော့ ဘတ် 200 အတောင်ပေးပေါက်လိုက်တာနဲ့ ကောင်းသွားပါပြီ...နည်းပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ...
Attach လုပ်လို့မရအောင်လုပ်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေကို attach လုပ်ဖို့ကျတော့မရသေးဘူးဗျ..
ဒီဆိုင်မရလို့ ဟိုဆိုင်ပြောင်းဆိုတော့လည်း ပြောင်းလို့ရပါတယ်..ဒါပေမယ့်လည်းဗျာ...အောက်တာပေါ့..သေရေးရှင်ရေးကိစ္စကျတော့..ပြောင်းဖို့အချိန်မရဘူးလေဗျာ.....ဘယ်လိုလဲ.ကွန်ပျူတာကို hack မယ့် မြန်မာhacker တွေ ဒီဖိုရမ်မှာ မလာဆွေးနွေးဘူးလား..ဆွေဟက်ကာများခင်ဗျား... .ပညာဟူသည် မလျှိူစကောင်းတဲ့..နည်းလေးများမစပေးကြပါအုံးလား....hack ဖို့အတွက်မဟုတ်ရကြောင်းပါခင်ညာ......
သူက download နဲ့ upload ကိုပိတ်ထားလို့လား..
အိမ်မှာတော့ fileden ကနေ တင်လို့မရပါ..
www.divshare.com ကနေ တင်လိုက်တာ..
ဟုတ်တယ်ဗျ..Internet cafe ဆိုင်က downlaod နဲ့ upload ကိုပိတ်ထားတာ
ဆိုင်က internet connection နှေးလို့မဟုတ်ဘူး...ကျနော်ကလိကြည့်ပြီးပြီ..ကူညီကြပါအုံး....
မေးဖန်များ..စကားရ (လိုလျှင်ကြံဆ၊ နည်းလမ်းရ)
:1: try it please ,,that is really nice.
January 2008 edited January 2008 Moderators
ဖိုင်သိပ်မကြီးရင် Base64 နဲ့ encode လုပ်ပြီး အီးမေး body မှာ ဒီတိုင်းရေးပြီးပို့ရင်တော့ ရကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။